सत्ता बाहिर भएपछि ओलीले देखे समस्या नै समस्या, देउवालाई एमसीसी, भूमि फिर्ता ल्याउन चुनौती – KhojPatrika
सत्ता बाहिर भएपछि ओलीले देखे समस्या नै समस्या, देउवालाई एमसीसी, भूमि फिर्ता ल्याउन चुनौती
४० महिना सत्तामा बस्दासम्म देखेनन् ओलीले समस्याका चाङ
खोज पत्रिका मङ्लबार, २०७८ साउन २६, २० :१४ बजे
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकारले सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको शब्ददेखि सारसम्म खेदो खनेका छन् । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको शब्द शब्दमा रहेको कमजोरी मात्र केलाएनन् अदालतको परमादेशबाट बनेको अपवित्र गठबन्धन भन्दै सरकारमाथि नै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । ओलीले एमसीसी पारित गर्न सरकारलाई चुनौती मात्र दिएनन्, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानीको भूमी फिर्ता ल्याउन बिन्ति चढाए झैँ गरेको आरोप पनि लगाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी सम्झौता के गर्नुहुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् ।
मंगलवार संसदमा बोल्दै ओलीले सरकारको साझा न्यूनमत कार्यक्रममा एमसीसी उल्लेख नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकै अघिल्लो सरकारले एमसीसी सम्झौता गरे पनि संयुक्त सरकारले एमसीसीबारे प्रष्ट धारणा नराखेको ओलीको आरोप छ । उनले एमसीसी पास गर्ने, नगर्ने वा चुप लाग्ने के हो ? भनी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरे । उनले एमसीसी बिर्सनु भयो कि क्या हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ? सरकारले आफूले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कुनै समय बोलेको क्लिप प्रयोग गरेर वातावरण बनाउन खोजेको उनको आरोप छ । सरकारसँग १६५ सांसद रहेको भन्दै उनले भने, ‘१६५ को सबल जत्थाले के भन्छ ? एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने ? किन चुप लागेको ? पास गर्नुस् संसदमा पेश गनुस् भन्दै देउवालाई ठाडो चुनौती समेत दिए ।
ओलीले आफुलाई सत्तावाट हटाएको कुण्ठा बिपक्षी गठबन्धनसँग संसदमा पोख्दै भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गरेर लिम्पियाधुरा, कालापानीका विषयमा समेत स्पष्ट कुरा गर्ने विषय साझा कार्यक्रममा समावेश नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । उनले साझा कार्यक्रमममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समस्याको रुपमा हेरीएको बताउँदै यो समस्या नभई हाम्रो भूमि रहेकाले तत्काल भूमी फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग पहल गर्न देउवालाई आग्रह गरे । यी भूमि छोड्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै ओलीले अहिलेको सरकारले फिर्ता गर्न नसकेमा डेढ वर्षपछि फेरि आफ्नै नेतृत्वमा बन्ने सरकारले फिर्ता लिने दावी समेत गरे ।
गठबन्धन सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको खेदो खनीरहेका ओली त्यत्तीमै सिमित भएनन्, उनले आफ्नो सरकारले गरेका सकारात्मक कुराहरुलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरा दिनु पर्ने दबाब समेत दिए । संसद पुर्नस्थापना पछिको पहिलो बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार बन्दा नबन्दै प्रतिपक्षीलाई धम्कीको भाषमा आगोसँग खेल्नु राम्रो होईन भनेर दिएको चेतावनीको जवाफ दिएका छन् । ओलीले त्यो आगो एक–दुई बाल्टी पानीले निभाएको पनि सम्झना रहोस् भन्दै प्रचण्डलाई चेतावनीयुक्त भाषामै जवाफ फर्काएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्री बनाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन् । ओलीले आफ्नो दलमा केही घाटा भएपनि माधव नेपाल पक्षलाई मन्त्री दिन हात जोडेर बिन्ती गर्दै देउवासँग आग्रह गरेका थिए । दुई पटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित भएपछि संसदमा पहिलो पटक बोलेका ओलीले अधिकांश समय सरकारो खेदो खनेरै बिताए । ओलीले खोपमा जालझेल गरेकोदेखि सरकारले आफ्नो कार्यक्रम संसदमा नल्याएर संसदलाई छलेको आरोप समेत लगाएका थिए ।
ट्याग : #अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, #संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम